Xibsiyada Mucaaridka Somaliland maxaa gabay? | Berberanews.com
Home WARARKA Xibsiyada Mucaaridka Somaliland maxaa gabay?
Xibsiyada Mucaaridka Somaliland maxaa gabay?
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka-la-moodka Ucid Eng Faysal Cali Waraabe, ayaa yidhi “Dawlad Bilaa mucaarid ahi waa dawlad Keli-talis ah”.
Faysal ma isagaa isdhaliilaya ma dawladda mucaarid buu islaha oo way la martay, mise farriin rux ruxasho ayuu u dirayaa xukuumadda. Waayo waa xisbiga labaaad ee Somaliland ka jira ee mucaarid isku sheega ah balse ay shacabku ku hungoobeen maadaama ay gabeen doorkii mucaarid ee laga doonayay inay ku dhaliilaan goldaloooyinka siyaasadeed iyo maamul ee xisbul xaakimka, kuna ilaaliyaan danaha qaranka iyo rabitaanka shacanka.
mucaarid la’aantuna waa astaaan inoo muujinaysa in Somaliland sii luminayso doorkii dimuqraadiyadeed ee lagu yaqaaanay ama isku dheelitirnaantii siyaaasadaha muxaafidka iyo mucaaridka oo ay gabeen labada xisbi mucaarid oo ay ahayd inay toosiyaan xukuumadda kuna dhaliilaan wixii ka qallooca.
ma jirto asbaab qudha oo ay ku andacoon karaan inay kaga gaabsadaan doorkii looga baahnaa, hadaanay jirin danno shakhsiyadeed oo masuulliyiinta mucaaridku ku bedesheen doorkii looga baahnaa inay ciyaaraan.
Haddii Xisbiyada Mucaaridku kusii jiraan xaaladdan ay haatan ku suganyihiin waxay lumin doonaan taageerrada aan buurnayn ee dadka taageeraa u hayeen, islamarkaana waxay abuuraysaa jawi xisbi qudha iyo madaxweyne qudhi ku Amar ku taagleeyaan masraxa siyaasadda oo hadba siday doonaan ka yeelaan.
halkan ka daawo Muuqaalka hadalka Faysal Waraabe.
Faalladan waxaa qortay Shebekadda Berberanews.com
Previous articleProf Cali Khaliif oo ku geeriyooday Jigjiga
Next articleProf Cali Khaliif galaydh: siyaasi aragti dheerra oo Somali ka baxay